Home Wararka RW Kheyre “Dowladda waxay aruurisay canshuurtii ugu badneyd 30 sano kaddib “Dhageyso”
RW Kheyre “Dowladda waxay aruurisay canshuurtii ugu badneyd 30 sano kaddib “Dhageyso”
Magaalada Muqdisho gaar ahaan Xarunta Xalane waxaa Maanta ka furmay shir looga hadlayo Ganacsiga iyo Maalgashiga Soomaaliya,waxaana furay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Shirkaas,waxaa ka qeyb galaya Wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, ganacsato iyo wakiilo caalami ah,waxaana soo qaban qaabisay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay Ummadda Soomaaliyeed,waxana uu bogaadiyay Dowladda Turkiga oo ka mid ah wadamada maalgashiga ka sameeyay Soomaaliya.
R/Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo shirka ka hadlayey ayaa sheegay in Ganacsadatada Soomaaliyeed ay door muuqda ka qaateyn kobaca dhaqaalaha dalka.
Waxa uu sheegay R/wasaare Kheyre in Ganacsatada Soomaaliyeed ay xukuumadiisa kasoo aruuriyeen canshuurtii ugu badneyd muddo 30 sano ah Waxa uuna ku bogaadiyay garab istaaga xukuumadiisa.
Previous articleMasuul sare oo ktirsan Dowladda Uganda oo digniin adag u diray Ciidamada Soomaaliya.
Next articleQarax xoogan oo ka dhacay duleedka Magaalada Muqdisho
Dr. Cali Jimcale Axmed : Cabsi Kama Qabo in af Somaaliga...